Kugadzirwa Kugadzira Simbi yeRong pamwe neyemakanika billets yekugadzira choto
musha / Applications / Induction Forging / Induction Kugadzira Simbi Tsvimbo End
Category: Induction Forging Tags: kumisikidza tsvimbo yesimbi kumagumo, yekugadzira simbi tsvimbo, induction yekugadzira simbi, induction yekugadzira simbi yekuguma, induction yekugadzira simbi yedanda kupera, RF yekugadzira tsvimbo yesimbi
Induction Yakagadzira Siri Yechipfuva Nokugadzirisa Kupisa Mushonga
Chinangwa Kupisa magumo esimbi matanda kusvika ku1800FF isati yatanga kuita basa. Kugadziriswa kwematanda kunosanganisira kupisa, kutsikirira muzvikamu zviviri kufa kugadzira pombi yekupedzisira, uye kudziya kwekupedzisira mune chiteshi coil yekutsamwisa tsvimbo uye kubvisa kunetseka kunetseka. Mutengi anofanira kugadzirisa tsvimbo dzakasiyana
dhayamita pakati pe 1/8 ″ uye 1/2 ″. Tembiricha yetanda inofanira kunge iri pamusoro pe1400FF pakati nepo mupendero wekunze uchikwira kunge 1900ºF.
Chinyorwa Simbi tsvimbo dzakasiyana dzakasiyana kubva 1/8 ″ kusvika 1/2 XNUMX
Kakawanda 50 kHz
Zvishandiso DW-HF-45kW kuburitsa yakasimba nyika induction simba rekushandisa inosanganisira iri kure kupisa chiteshi ine 2 ma capacitor anokwana 0.5 μF, pamwe ne6 kutendeuka (3 pamusoro pe3) helical mhando coil.
Maitiro Iyo DW-HF-45kW kuburitsa yakasimba nyika induction magetsi yakawanikwa kuzadzisa zvinotevera mhedzisiro:
1/2 1400/1 tsvimbo yaive yakaganhurirwa nemamiriro epanyama esimbi nenguva inodiwa yekuisa kupisa kubva kumucheto kwekunze kwebhawa kuenda pakati kuti kusimudzire tembiricha kusvika 8ºF isina kusungunuka pamusoro pebhawa. Iyo 80/XNUMX ″ tsvimbo yekupisa yaive yakaganhurirwa neiyo induction kudziyisa kugona paXNUMX kHz. Mahara akakura mabara zvishoma nezvishoma anopisa nekukasira kusvika kune ekushisa ekudzora maratidziro.
Induction Yakagadzira Simba resimbi